मैले देखे भोगेको तुलसीपुर | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / मैले देखे भोगेको तुलसीपुर
मैले देखे भोगेको तुलसीपुर
Posted by: युगबोध in विचार, स्लाइड February 10, 2019	0 95 Views
म दाङ तुलसीपुरमै जन्में, हुर्किए र बढें। केही वर्ष अध्ययनको÷कामको सिलसिलामा काठमाडौं लगायतका अन्य ठाउमा बसें। नेपाल सरकार तथा केही एनजीओ÷आइएनजीओको झोला बोकेर नेपालका दूरदराजका जिल्ला, सुदूर कर्णालीका जिल्लाहरुमा पनि पुगियो।
विकासको, समृद्धिको, अधिकारको, न्यायको, सेवाको छोटो अनुभव लिइयो। जब नेपालमा नया संविधान जारी भएर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले निर्देशित गरेको तिनै तहका सरकारको व्यवस् था भयो र स् थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भयो तबदेखि नै म तुलसीपुरमा आउन चाहेको थिए। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका देश÷विदेशमा विभिन्न घटनाक्रमले चर्चामै छ। विशेषतः यहा“को नेतृत्व घनश्याम पाण्डेको परिपक्व र दूरदर्शिता, क्षमता र अनुभव अनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस् तरको संघसंस् थाहरुको सफल नेतृत्वकर्ताको हैसियतले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मुहार बदलिने र देशकै नमूना शहर बन्नेछ भन्ने ठूलो आशा, भरोसा छ। हामी तुलसीपुरबासीको लागि त झन हुने नै भयो।
तुलसीपुर उपहानगरपालिका अन्तर्गतको शहरी स् वास् थ्य प्रवद्र्धनको कार्यालय प्रमुख भएर मैले काम गरेको करीब ६ महिना पुग्दैछ। यसबीचमा मैले व्यक्तिगतरुपमा देखेका, जानेका, बुझेका, भोगेका केही कुराहरु अनुभवको रुपमा यहा“ राख्न चाहन्छु। एउटा जनस् वास् थ्य अधिकृतको रुपमा मैले काम गर्दै गर्दा, हामीले सुनेको र आशा राखेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र केही कमीकमजोरी देखें। जसले गर्दा हामीले सोचेको, कल्पेको, आशा राखेको शहर हुन सक्दैन कि ? मनमा सधैं लागिरहन्छ, केही त गरौं आफ्नो ठाउको लागि। स–साना नै किन नहुनु, केही थालनी त गरौं सकारात्मक परिवर्तनको लागि ? हामीले आफ्नो मनमा÷मस् ितष्कमा सजाएका सपना र गुम्साएका गुनासाहरुलाई यहा राख्न चाहन्छु।
तुलसीपुर नगरपालिकाको विकास र समृद्धिको बारेमा मैले सुन्दै आएको दुईथरी अति कुरा के छ भने– एकथरी मान्छेहरुले जोड जोडले मेयर घनश्याम पाण्डेलाई भगवान बनाइरहेका छन्। उनीहरु मेयरको प्रशंसामा जति घण्टा पनि खर्च गर्न सक्छन्। संसारका सबै असल व्यक्तिमा हुने गुणहरु उनीहरुले मेयर घनश्याममा देख्छन्। भलै त्यो उनीहरुको गोजी भर्ने दाउ किन नहोस्। अर्कोथरी मान्छेहरु छन् जसले मेयर घनश्यामको उछितो काढ्नेबाहेक अरु काम गर्दैनन्। यसरी एकथरीले भगवान र अर्कोथरीले राक्षस नै बनाउने प्रत्यन गर्दा, म उहाकै नेतृत्वमा रहेको उपमहानगरपालिकाको कर्मचारीको रुपमा केही फरक कुरा राख्न चाहन्छु। एउटा मान्छे आफैमा न भगवान हुन सक्छ न त राक्षस नै। र पूर्ण त झनै हुन सक्दैन। समाजको नेतृत्व गर्नलाई, बदल्नलाई, परिवर्तन गर्नलाई न कसै एकजनाको रातारातको जादूले काम गर्छ न कसैले चमत्कार गर्न सक्छ। कुनै पनि ठाउ“को विकासमा त्यहा“का हरेक सचेत नागरिकहरु, अगुवाहरु र विभिन्न तह र तप्कामा रहेर काम गर्ने हरकोहीको महत्वपूर्ण र जिम्मेवार भूमिका हुन्छ। ठूलो भूमिका हुन्छ। सबै सबैको सहयोग र सहभागिता अनिवार्य नै छ।
आज तुलसीपुर उपमहानगरपालिमा सबैभन्दा ठूलो रोगको रुपमा रहेको कुरा नै त्यो हो कि, सबै कुरामा मेयर घनश्याम पाण्डेलाई नै तेस्र्याउने प्रवृत्तिले जरो गाडेको छ।
आफ्नो भूमिका पूरा नगर्ने, कर्तव्य पालना नगर्ने, इमानदार भएर सेवाग्राहीलाई सेवा नदिने तर जे कुरामा पनि सम्बन्धित भएर मेयरलाई नै भिडाइदिने बानीको विकासले हामी कहीं पुग्दैनौं। हामी सबैले देखेको बुझेको सत्य के हो भने तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डे भएका कारणले राम्रा नराम्रा सबै कुराको मुख्य जस, जिम्मेवार उहा“ नै हुनुहुन्छ। तर यो पूर्ण सत्य होइन। सत्य त यो हो कि, उहाको नेतृत्वमा, क्षमतामा, सोचमा, दृष्टिकोणमा बन्ने योजना हुन्, पूरा गर्ने र त्यसलाई योजनाबाट यथार्थमा बदल्ने भनेको त नगरपालिकाभित्रका जिम्मेवार निकायहरु र त्यसस“ग सम्बन्धित व्यक्तिहरुको मुख्य जिम्मा, भूमिका, काम हो। आज तुलसीपुरलाई स् मार्ट तुलसीपुर बनाउने योजना जसरी आएका छन्, के तिनी योजनाहरु कम महत्वपूर्ण छन् ? तुलसीपुरलाई खेलकूद नगरी बनाउने, सुत्केरी पोषण प्रोत्साहन भत्ता, किसानहरुका खरबिहीन घरहरुको निर्माण, स् मार्ट छोरी कार्यक्रम, बालश्रमको व्यवस् थापन, टरिगाउ“ एयरपोर्टको सञ्चालन, व्यवस् थापनलगायतका जति पनि ठूला काम र योजनाहरु शुरु भइरहेका छन्, यी योजनाहरुले सा“च्चै तुलसीपुरको मुहार बदलिने छ। के यी कम प्रभावकारी योजना
हुन् ? एउटा नेतृत्वले कोर्न खोजेको खाका के सुन्दर र महत्वपूर्ण छैन ? एउटा सफल नेतृत्वले देख्ने सपना, राख्ने सोच मेयर घनश्याम पाण्डेमा प्रचुर देखिन्छ। राम्रो देखिन्छ। यसमा प्रशंसा गर्नुपर्ने हुन्छ र उहाको योजना, सोच, सपनामा हैंसेमा होस् टे थप्नु पर्ने हुन्छ।
जसरी हुनुपर्ने हो त्यसरी बजारको चुस् तदुरुस् त व्यवस् थापन हुन सकिरहेको छैन। आज नगर भित्रका सेवाग्राहीहरुले अनेक प्रकारका झन्झट, ढिलासुस् ती, कमिशन, भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता भोगिरहेका छन्। हैरानी खपिरहेका छन्। यहा“का हुने हरप्रकारका विकास निर्माणमा चुहावट भइरहेको छ, के यी सबैको जिम्मेवार व्यक्ति मेयर मात्र हुनुपर्छ ? के यी सबै कमजोरीमा मेयरलाई खिसिटिउरी गरेर हुन्छ ? अहिले बाटो, घाटो र विकास निर्माणमा चरम बेथिति र भ्रष्टाचारको निगरानी गर्ने जिम्मा मेयरको मात्र हो ? आज यो नगरभरी अनेक प्रकारका बिकृति÷विसंगतिहरु चलिरहेका छन्। आज उपचारका नाममा ठगी धन्दा चलिरहेको छ। जग्गा दलालहरुको बिगबिगीले शहर कुरुप बन्दैछ। बजारका नाली मात्र होइन्, सडक, सार्वजनिक स् थलहरु फोहोर छन्, अव्यवस् िथत छन्। नगरका दूरदराजका ठाउमा पानी, बाटो, बिजुली, स् वास् थ्य सेवा, शिक्षा, सञ्चारको पहु“च कमजोर छ। यी सबैमा के एउटा मात्र मेयर जिम्मेवार हुन्छ ? नगरभरिका वडाहरुमा, अध्यक्ष, सदस् यलगायतका जनप्रतिनिधि छन्, कार्यालयमा कार्यरत हजारौं कर्मचारी छन् के तिनीहरु कत्ति जिम्मेवार बन्नुपर्दैन ?
तुलसीपुरलाई स् मार्टसिटी बनाउन होस् या हरेक तह, तप्का र वर्गका जनताको जीवनस् तर उकास् नमा होस्, हामी सबैको एकमुष्ठ मेहनत, प्रयत्न र प्रयास जरुरी हुन्छ। हाम्रो तुलसीपुरलाई राम्रो तुलसीपुर बनाउने जिम्मा मेयरको मात्र हुन सक्दैन। मेयर घनश्याम पाण्डेको सफल नेतृत्वमा हामी सबै कटिबद्ध हुन जरुरी छ। नेता हुने, नेतृत्व गर्ने कुरा सबैभन्दा कठिन र चुनौतीपूर्ण काम हो। त्यसमाथिको यो नया संरचना हो, जसमा आफू पनि सिक्नु पर्नेछ र अरुलाई पनि सिकाउदै जानुपर्नेछ। हामी तुलसीपुरवासीले संयोगले घनश्याम पाण्डेजस्तो मेयर पाएका छौं। उहा“स“ग भएको विशाल अनुभव र अद्वितीय क्षमता अनि टाढा टाढासम्म देखेर, बुझेर, हेक्का राखेर सपना देख्ने, भिजन राख्न सक्ने÷कोर्न सक्ने, त्यसमाथि राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय स् तरको उहाको पहुच र यसअघि नै विभिन्न सामाजिक कार्यमा, संघसंस्थाहरुमा सफल नेतृत्व गरिसकेको गौरवशाली इतिहासलाई हामीले भरपूर उपयोग गर्न जरुरी छ। उहा“स“गका यी राम्रा कुराहरु तुलसीपुरको हितको लागि उपयोग गर्न सके हामी सबै अन्य, अरु शहरको प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छौं। त्यो आशा र अपेक्षा अनि संभावना मैले देखेको छु।
हाम्रो तुलसीपुरलाई सा“च्चिकैको तुलसीपुर बनाउन, स् मार्ट तुलसीपुर बनाउन धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। करिब छ महिनासम्मको मेरो अनुभवले भन्छ, यहा“ मेयरको वरिपरिको घेरालाई हेर्दा काम भन्दा कुरा बढी गर्ने जनप्रतिनिधिहरु छ्याप्छ्याप्ती छन्। यहा“ मेयरलाई निशर्त र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने मान्छेहरु कमै देखेको छु। गर्न नहुने कामहरुमा हात हाल्ने, कमिशन, भ्रष्टाचारमा लिप्त मान्छेहरुको ठूलो घेरा छ। कार्यालय कार्यालयबीचका कर्मचारीहरुमा जुन स् तरका सहयोग, समन्वय हुनुपर्ने हो त्यसमा सर्वथा अभाव छ। नगरको विकासमा नगरभरिका उद्योगी, व्यवसायी, सचेत नागरिक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, सक्षम युवायुुवतीहरुको जसरी हरतरहको सहयोग हुनुपर्ने हो, त्यो वातावरण जसरी तयार पार्नेमा पनि कसैको चासो देखिदैन। त्यो कतै देखिदैन। भए पनि कमै छ। यिनै केही कारणहरु छन् जसले भने जसरी काम भएको देखिएको छैन।
यस नगरपालिकाको शहरी प्रवद्र्धन केन्द्रको नेतृत्व गर्दै गर्दा, म लगायत यहा“ कार्यरत नौजना सक्षम सहकर्मी साथीहरुसग त्यस्ता धेरै सोच, योजना र सपनाहरु छन् जसले यो नगर स् मार्ट सिटी बन्नमा हाम्रो पनि एक हौसला, साथ होस्। हाम्रो विश्वास छ, यस नगर विकासको एउटा बलियो इट्टा बन्नेछौं। मानव जीवनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नै स् वास् थ्य हो। स्वास्थ्य नै ठूलो धन हो। हामी सग स्वस्थ स्वास्थ्य, स्वस्थ्य शरीर छैन भने केही पनि छैन। यस नगरभरीका हरेक उमेर समूहका व्यक्तिहरुलाई स्वस्थ राख्न विभिन्न कार्यक्रम र योजना तयार गरिरहेका छौं। यस नगरपालिकामा रहेर छ महिनामा मैले जुन स्तरको अनुभव लिए त्यसले म लगायत हाम्रो टिमलाई अझै ऊर्जावान बनाएको छ। यो अवसरको लागि नगरपालिकालाई धन्यवाद भन्दै आगामी दिनमा यसरी नै आफ्ना अनुभव सार्वजनिक गर्ने विश्वास र आशासहित आजलाई यो आलेखको बिट मार्छु।
Previous: १२ वर्षपछि हिमपात (फोटो फिचर)
Next: भारतको विषयमा मसालभित्र दुई लाइनको संघर्ष